Ama-leashes amahle kakhulu ezinja, iyiphi okufanele uyikhethele isilwane sakho? | Izinja Umhlaba
Ama-leashes amahle kakhulu wezinja
Ukuhamba nenja yethu ngokuphepha nangokunethezeka kungenye yezibopho ezinkulu esinazo njengabangane besilwane sethu. Ngakho-ke, Ukukhetha eyodwa ezinkulungwaneni zezinja zezinja esingazithola emakethe kubalulekile.
Futhi empeleni, Ukunquma kwelinye lamaleashes amaningi ezinja kuyinto enhle, ngoba kunezinhlobo eziningi ezitholakalayo. Ngakho-ke, kule ndatshana, ngaphezu kokuncoma amamodeli athile, sizokunikeza amanye amathiphu ukuze ukwazi ukukhetha ibhande elikufanela kahle wena nenja yakho. Ungakhohlwa ukufunda okuthunyelwe kwethu mayelana amahanisi amahle kakhulu ezinja ukuze ukuthenga kwakho kuphelele!
1 I-leash enhle kakhulu yezinja
1.1 Ibhande elandekayo nelicabangayo
1.2 Ibhande lokuqeqesha
1.3 Inja enkulu yenja
1.4 Ibhande lokugijima
1.5 Izinja ezihoxiswayo
1.6 Ishibhile senja eshibhile
1.7 Ibhande lokunwebeka likhululekile kakhulu
2 Izinhlobo ze-leashes yezinja
2.1 Imichilo yenayiloni
2.2 Amabhande wamaketanga
2.4 Imichilo ehlehlisekayo
3 Ungayisebenzisa kanjani ibhande ngokufanele
4 Ungathenga kuphi ama-leashes wezinja
I-leash enhle kakhulu yezinja
Amabhande ezinja, ...
Ibhande laseYangbaga le...
I-Flexi - Strap entsha ...
I-Looxmeer Inja Leash ...
Ibhande lenja ...
I-Arppe 2092010101 Ibhande...
Ibhande elandekayo nelicabangayo
Inja e-Pecute ...
Uma ufuna ibhande elinakho konke, lokhu kungukukhetha kwakho okuhle kakhulu. Ngaphezu kokuba nemibono eyizinkulungwane emihle ku-Amazon, izici zayo ziyazikhulumela: iyanwebeka (ifinyelela kumamitha amahlanu), imelana kakhulu, emaphethelweni ebhande ayabonakala futhi ngaphezulu ifaka ophethe isikhwama semfucumfucu ozoqoqwa imfucumfucu evela enjeni yakho.
Njengoba sishilo, Le leash leash ivelela ukuphepha kwayo okukhulu nokumelana nayo. Ukuqeda kungu-premium, kufakwe i-chrome, futhi kuqinisekiswe ukuthi inja yakho ngeke iwaphule kalula. Ngaphezu kwalokho, isibambo sebhande sinomumo okhululekile kakhulu we-ergonomic futhi ongasheleli futhi sifaka ukubopha kunkinobho ekuvumela futhi ukuthi wandise ibhande.
Le modeli iyi-leash enhle yokuqeqesha inja yakho. Yenziwe ngenayiloni futhi inezinketho eziningi ongakhetha kuzo ezifanele wena nenja yakhoIsibonelo, ubude bezintambo, obungaba kusuka kumamitha ama-3 kuye kwangama-30 (ukuphawula okuningi kuthi, ngasendleleni, ukuthi kungcono ukuthatha ibhande elifushane ngoba uma kungenjalo, liyabambeka futhi kunzima kakhulu isibambo). Indwangu ithambile futhi iyathandeka ekuthintweni, futhi i-carabiner ifakiwe ukunamathisela ikhola noma ukubopha inja iyinsimbi futhi ijikeleza ama-degree angama-360. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ufaka isikhwama esisebenzayo ukugcina ibhande lapho singasetshenziswa.
Inja enkulu yenja
I-Taglory Dog Leash, ...
Le bhande ivelela izinto ezimbili: ukumelana kwayo nokubonakala kwayo. Iqukethe intambo ewugqinsi (uhlobo olukhuphukayo, oluhle kakhulu, futhi olutholakala ngemibala ehlukahlukene ngaphezulu), olune-carabiner yensimbi ezungeza ama-degree angama-360, nengxenye eboshiwe esibambo. Ilungele ikakhulukazi izinja ezinkulu, njengoba imelana kakhulu, futhi itholakala ngosayizi ababili, isentimitha elilodwa no-1. Mayelana nokubonakala, ukuthungwa ngezinto ezibonakalisayo kuhle ukuthi inja yethu ilawulwe ebusuku.
Ipecute Running Belt ...
Uma ungomunye walabo bantu abajwayele ukwenza imidlalo nenja yabo, ungaphuthelwa yileleash eyenzelwe ukugijima. Ibhande luhlobo lwentwasahlobo, olunikeza inkululeko eyengeziwe nokulawula, ngaphezu kwalokho, lufaka izibambo ezimbili ukuze ukwazi ukugcina ukulawula ngaso sonke isikhathi. Ukuvalwa kwenziwa nge-chrome, okuyinikeza ukuphepha okwengeziwe, futhi kufaka nebhande elisebenzayo ongalifaka emhlane wakho futhi eliphethe, ngaphezu kwe-strap hook, umnikazi webhodlela kanye nephakethe elifakiwe.
Sibuya nomunye umucu wezinja ohoxiswayo, lona onamamitha ayi-5 we-leash futhi omelana nokudonswa kwezinja kuze kufike kumakhilo angamashumi amahlanu. Inenkinobho enezikhundla ezintathu: misa isikhashana, ukhiye futhi uvule, okuzokuvumela ukuthi ugcine ukulawula ibhande ngaso sonke isikhathi. Ibhande liyakhombisa futhi litholakala ngemibala emibili (mpunga noluhlaza okwesibhakabhaka) nosayizi ababili (M no-L). Umsebenzi othakazelisa kakhulu wale modeli ukuthi, uma kwenzeka inja iluma i-leash, ungasika ucezu olonakele futhi usebenzise okunye okusele.
Ishibhile senja eshibhile
I-Joytale Leash yenja...
Kulabo abafuna ibhande elingashintshwa kuwo wonke amaphakethe, inketho enhle yile elandelayo, ngoba kubiza cishe ama- € 8 kuphela. Iqinile, yenziwe ngenayiloni, futhi itholakala ngemibala ehlukahlukene. Ngaphezu kwalokho, inezinye izinto ezithokozisayo, njengesibambo esithambile ngaphakathi, ngokubamba okunethezekile kakhulu, imithungo ekhanyayo nobude obuhlukahlukene obutholakalayo. Ekugcineni, inokuvalwa kwensimbi nge-swivel engu-360 degree ukuze uhlale uphethe.
Ibhande lokunwebeka likhululekile kakhulu
Ibhande le-morpilot le ...
Futhi sigcina sinezinketho ezipholile kakhulu zokugijima nenja yakho kepha ngaphandle kwebhande elakhelwe ngaphakathi lomuntu. Yile leash enwebeka, enesibambo esintofontofo futhi esithambile, futhi-ke, ingaphakathi elinwebekayo elenza libe lide nezinkontileka, elikuvumela ukuthi ugcine ukulawula inja ngaphandle kokusebenzisa ama-leashes ahlehliswayo. Ukuvalwa kunesici esisebenzayo, umsebenzi wokukhiya (ofana nowe-carabiner) ukukuvimbela ukuthi kuvulwe ngengozi.
Izinhlobo ze-leashes yezinja
Lapho ukhetha i-leash efanelekile yesilwane sakho, kufanele ucabangele izinhlobo ezahlukahlukene zezinhlamvu zezinja ongazithola emakethe. Nakhu okuvame kakhulu:
I-Docatgo Dog Leash ...
Imichilo ejwayelekile kakhulu Yibo abenziwe ngenayiloni futhi kunjalo nje, intambo yokuthwala iboshelwe enjeni yethu. Imvamisa zitholakala ngosayizi nemibala eyahlukahlukene futhi, njengoba zilula kakhulu, futhi zivame ukubiza kakhulu. Kodwa-ke, ungakhohliswa ubulula babo obubonakalayo: yibo abanconywa kakhulu emisebenzini yansuku zonke nasekuqeqesheni inja yakho ukuthi ingagijimi.
HAPPY HACHI Leash Chain ...
Ukuxhunywa kwamaketanga kuhloselwe ikakhulukazi kulezo zinja ezinkulu kangangokuthi aziyeki ukuluma nokulayisha leash. Izinto okwenziwa kuzo ukuqhuma kwalolu hlobo ziyaphikisana kakhulu, ngakho-ke, kufanele uqaphele kakhulu, ngoba uma inja ingaqondi maduzane ukuthi ngeke ikwazi ukugqashula leash, ingalimaza amazinyo ayo .
Ibhande le-PHILORN le ...
Ama-leashes ezinja enzelwe ezemidlalo Bahlukaniswa ngokungabuyiselwa emuva, empeleni, iningi liyanwebeka ukuze ukwazi ukulawula isilwane sakho (futhi ungagcini ukuwa). Kukhona lezo ezibandakanya izinketho ezithokozisayo zabantu, isibonelo, ibhande lokubeka amanzi noma okhiye, njengoba sibonile ngenhla.
Ama-leashes abuyisekayo akudala phakathi kwezinja zezinja. Zihlukaniswa ngokuba nesibambo sepulasitiki esiqinile, i-ergonomic ne-non-slip, enganika ibhande elingaphezulu, ilicoshe noma ilikhiye. Kuyindlela enhle kakhulu yezinja ezincane noma kulabo abahamba kakhulu, inqobo nje uma bengenamandla amakhulu.
Inja Leash Hands ...
Ekugcineni, imichilo enwebeka ifana kakhulu nemichilo yenayiloni, yize inendlela yokusebenza yangaphakathi evumela ukuthi ibhande likhule kancane, enikeza inja yakho inkululeko ethe xaxa. Luhlobo lwebhande olunconywe kakhulu kulabo abaphuma bayokwenza ezemidlalo noma kulabo abafuna okuthile maphakathi nomucu wenayiloni wendabuko nalowo ohlehliswayo.
Ungayisebenzisa kanjani ibhande ngokufanele
Lapho ugqoke ibhande, Kubalulekile ukuthi sibheke uchungechunge lwamathiphu azosiza inja ukujwayela kuma-leash nasekuhambeni kuba yintokozo hhayi iphupho elibi. Ngokwesibonelo:
Ukujwayeza isilwane sakho, okungenani ekuqaleni, kubalulekile ukuqinisa ukuhamba kanye neash nge-stimuli enhle, isibonelo, ukuphululwa, amagama athambile noswidi othile.
Kubaluleke kakhulu lokho lapho ubeka i-leash, ungazami ukubangela ukusongela. Ngena ezingeni lakho futhi, njengoba besishilo, umphulule futhi ukhulume kahle ukuze angatatazeli.
Okokuqala, kungcono ukhethe ibhande elide elide ngakho awuzizwa uthwele kanzima.
Ngokunjalo Uma uphuma izikhathi zokuqala, zama ukubenza bahambe ngokuthula (okusho ukuthi, ungamyisi epaki yezinja, ngokwesibonelo, lapho ezothola khona izinto eziningi ezingamhlula) futhi zimshiye emoyeni wakhe, ahogele konke akufunayo futhi amoshe isikhathi sakhe.
Ungakhohlwa ukuletha imiklomelo embalwa nawe. Uma ubona ukuthi inja yakho ikhungathekile, ungayisebenzisa ukuklomelisa isimilo sayo esihle futhi ngaleyo ndlela unikeze ukuqiniswa okuhle.
Ekugcineni, uma ukwazi, kungcono ukusebenzisa ihhanisi esikhundleni sokhololo. Ngakho-ke uma inja ikuphonsa, ungayilawula kangcono futhi, phezu kwalokho, ngeke icwile. Kungcono sobabili!
Ungathenga kuphi ama-leashes wezinja
Into enhle ngezinwele zezinja ukuthi ungabathola yonke indawoKusuka ezitolo ezikhethekile kuya kunoma isiphi isitolo esiphakathi nendawo nesigaba sezilwane ezifuywayo. Nazi izindawo ezivame kakhulu:
Okokuqala, siyakuthola Amazon, umholi kulolu hlobo lwemikhiqizo, enhlobonhlobo enkulu yazo zombili izinhlobo namanani. Ngenketho yayo enguNdunankulu, ngokungeziwe, uzoba nabo ekhaya cishe kusuka osukwini olulodwa kuye kolandelayo.
Zinconywa kakhulu izindawo ezikhethekile, ikakhulukazi izitolo zezilwane ezise-inthanethi, njenge-Kiwoko, noma lezo ezinokukhetha kokubili, ku-inthanethi nangokomzimba, njenge-TiendaAnimal. Ezinguqulweni zayo zomzimba, into enhle kakhulu ukuthi ungawubona mathupha umkhiqizo, okuhlala kusiza umsebenzi wokunquma kokunye noma kokunye.
Okokugcina, ku isitolo somnyango njengo-El Corte Inglés noma uCarrefour uzothola izinketho ezimbalwa ezithakazelisayo. Kodwa-ke, banephuzu abamelene nalo, ngoba, njengoba bengekho ezikhethekile, bathambekele ekubeni nokuhluka okuncane kunalokho okuyikho. Kodwa-ke, bayindawo enhle yokuthola amamodeli alula azokukhipha endaweni exinene.
Siyethemba ukuthi sikusizile ukuthola ama-leashes amahle kakhulu ezinja ngalokhu kukhethwa nalesi sihloko ngamathiphu ambalwa lapho ukhetha futhi uqala ukuwasebenzisa nenja yakho. Sitshele, yisiphi isipiliyoni onaso ngezintambo? Ingabe uyayincoma imodeli ethile? Ngabe isilwane sakho sicabangani ngazo? Khumbula ukuthi ungasitshela ukuthi ufunani, kufanele usishiyele amazwana!
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Ama-leashes amahle kakhulu wezinja
Amathambo amahle kakhulu ezinja
Omatilasi abahamba phambili bezinja ezinkulu, ezinkulu nezipholile